Fahamka Muhiimadda Tilmaamaha Tayada Tayada (IQG) | Martech Zone
Fahamka Muhiimadda Tilmaamaha Tayada Tayada (IQG)
Arbaco, Juun 6, 2016 Ted Dhanik
Iibsiga warbaahinta khadka tooska ah kama duwana iibsashada joodariga. Qofka macaamilka ahi wuxuu ku arki karaa furaash hal dukaan oo ay rabaan inay iibsadaan, isagoo aan ogeyn in dukaan kale, isla gabalku uu yahay qiimo hoose maxaa yeelay wuxuu ku hoos jiraa magac ka duwan. Muuqaalkani wuxuu ku adkeynayaa iibsadaha inuu si sax ah u ogaado waxa ay helayaan; waxaa la mid ah xayeysiinta internetka, halkaasoo cutubyo la iibsado oo la iibiyo oo dib loogu soo iibiyo alaab-qeybiyeyaal kala duwan, iyadoo la abuurayo suuq aad u ceeryaamo leh oo iibsadayaashu leeyihiin hufnaan aad u yar.
Arrintu waxay ka dhalatay xaqiiqda ah inay goobta ku dhex jiraan kumanaan shirkadood, in badan oo ka mid ahi waxay leeyihiin luqado kala duwan, sharciyo kala duwan, jaangooyooyin kala duwan iyo qaab kale oo ay ugu shaqeeyaan meheraddooda. Maqnaanshaha hab isku mid ah ayaa horseeday TAG Tilmaamaha Tayada Tayada (IQG), oo ah nidaam shahaadooyin soo ifbaxaya oo loogu talagalay iibiyeyaasha xayeysiinta dhijitaalka ah. IQG waxay siisaa halbeeg aasaasi ah macaamil ganacsi, taasoo u oggolaanaysa iibsadayaasha inay gaaraan go'aanno xog ogaal ah oo ku saleysan tayada. Waxay xaqiijineysaa qaabka badbaadada sumcadda iyo daahfurnaanta iibsadayaasha.
Ujeeddada barnaamijku waa in lagu kobciyo jawi lagu kalsoonaan karo suuqa lana yareeyo khilaaf kasta oo jira. Tilmaamahan waxay bixiyaan luqad guud oo si cad u qeexeysa astaamaha keydinta xayeysiinta iyo macaamillada dhammaan silsiladda qiimaha xayeysiinta. Iibiyeyaashu waxay u adeegsan karaan qaabkan guud ee shaacinta guud ahaan warshadaha si loo hubiyo u hoggaansamida baaxad weyn loona fududeeyo xallinta khilaafaadka iyo cabashooyinka.
Iibiyeyaashu waxay fursad u leeyihiin inay ka gudbaan kala-goysyada iyagoo ka qaybqaata barnaamijka IQG iyo helitaanka oggolaansho dhinac saddexaad ah oo ku saabsan kontaroolada iyo hababka kala duwan ee la xiriira. Shuruucdan aasaasiga ahi waxay xaqiijinayaan in iibsadayaashu ay faham buuxa ka haystaan ​​waxa ay iibsanayaan, iyo in iibiyeyaashu ay soo bandhigayaan macluumaadka ku habboon si loo fududeeyo tan; hab macquul ah oo macquul ah oo ganacsi lagu sameeyo.
IQG waxay hagaajineysaa dhammaan warshadaha iyada oo la ilaalinayo xayeysiistayaasha iyo kuwa daabaca. Tilmaamahan waxay xaqiijinayaan nuxurka iyo tilmaamaha hal abuurka ah ee ka ilaalinaya sumadaha iyo daabacayaasha in lala xiriiriyo waxyaabaha aan sumadda u lahayn. Xayeysiiyeyaashu waxay hubin karaan in xayeysiisyadooda aysan ku socon goobta lulataaye, daabacaadyaashuna waxay ka hortagi karaan xayeysiisyada tayada hooseeya ee aan u qalmin daabiciddooda inay ku shaqeeyaan boggooda.
Dhinac kale oo muhiim ah oo ka mid ah IQG ayaa ah in ay ku qasbeyso kaqeybgalayaasha in ay isdulsaaraan, habab si wanaagsan loo diiwaangeliyey oo ka socda ururka. Kooxda hantidhawrka waxay baaraan hababka waxayna hubiyaan in shirkad ay ku dhaqanto tilmaamahan. Hubintaani waxay abuurtaa jeegag iyo isku dheelitirnaan shirkadaha oo dhan ah. Marka sidaas la samaynayo, xisaabiyeyaashu waxay asal ahaan ka saaraan fikradda aqoonta hay'adeed iyagoo ka dhigaya shirkadaha dukumiinti oo ay la socdaan hannaanka.
Ugu dambeyntiina, IQG wuxuu qiimeeyaa halka ay tahay inay ahaato qiimaha. Adoo ka jaraya lakabyada aan tooska ahayn ee aan la garanayn halka ay ka yimaadeen, ciyaartoydu waxay awood u leeyihiin inay si habsami leh ganacsi ugu qabtaan. Tani waxay u oggolaaneysaa xayeysiistayaasha iyo daabacayaashu inay si furan oo daah-furan uga hadlaan waxyaabaha ay ku shaqeynayaan. Iyada oo la adeegsanayo cutubyo xayeysiis oo tayo sare leh ciyaarta, xayeysiiyayaashu waxay sameyn karaan ololeyaal guuleysta Isla mar ahaantaana, tirakoobkani wuxuu ku siinayaa daabacayaasha fursad ay ku kasbadaan CPMs sare iyagoo ku soo dallacaya qiimaha ku habboon cutubyadan la hubiyay.
Xayeysiinta khadka tooska ah waa ganacsi da 'yar oo soo koraya, oo markii ay warshadu koraan, ciyaartoydu waxay fursad u leeyihiin inay qaabeeyaan oo ay adkeeyaan jihada ay u socdaan. IQG waxay kordhisaa heerarka tayada alaabada waxayna siisaa noocyo leh tayada ugu sareysa uguna waxtarka badan xalalka xayeysiinta. Tani waa weli tallaabo kale oo ku saabsan dadaalkeenna kala-geddisan iyo is-beddelaya si loo hubiyo tayada iyo qiimaha qof walba - magacyada, hay'adaha iyo daabacayaasha.
Ku Saabsan Kaqeybgalka: BDR
Hawlgelinta: BDR ayaa hogaamineysa mas'uuliyadda heerarka iyo caddeynta markay tahay antifraud, malware iyo tayada agabka. Hawlgelinta: BDR waxay noqotay mid ka mid ah shirkadihii ugu horreeyay ee si madax bannaan ugala xisaabtama heerarka QAG waxayna ku guda jiraan helitaankooda Shahaadada IQG. Hawlgal: BDR waxay sii wadaa inay si tartiib tartiib ah ulashaacdo daabacayaasha si loola dagaallamo arrimaha sida xun u saameeya tayada alaabada.
Tags: tiro xayeysiis ahadvertisingkhayaanada xayeysiintatiro xayeysiis ahtayada xayeysiintaantifraudtayada alaabadaTilmaamaha Tayada Tayadaiqgfurinxayeesiinta internetkadaabacayaashatagTAG Tilmaamaha Tayada Tayadaansixinta-saddexaad
Ted Dhanik waa agaasimaha guud iyo aasaasaha ku hawlan: BDR, Inc. Ted wuxuu u shaqeeyaa Sarkaalka Sare ee Fulinta kormeeraya suuq geynta istaraatiijiga ah, iibka iyo horumarinta ganacsiga, maareynta xiriirka macmiilka iyo helitaanka waxyaabaha ku jira.